ဟေးး ကို အဲခရော့ အမ်းး မှားလို့ ၆နှစ်လောက် ပျောက်သွားတာ ခုလမ်းမှားလာတာလား?
မဟုတ်ပါဘူး။ ညီကိုမောင်နှမတွေကို ပါရာစီတမောအကြောင်း ပြောပြချင်လွန်းလို့ ရောက်လာတာ။
မလုပ်ပါဘူး။ တကယ်ပြောတာ။ကျွန်တော့်မိန်းမနဲ့ ကျွန်တော်လေ သိလား အိမ်မှာနှစ်ရောက်ထဲရှိနေတုန်း အလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိ အရမ်းပြင်းနေတာပေါ့။ အဲဒေါ့ ကျွန်တော် အကြံရပြီး မိန်းမကိုပြောလိုက်မိတယ်
"မိန်းမရေ အင်းး အင်းး"
"အေး ဟုတ်သားပဲ ဟဲဟဲမေ့လို့... ဘယ်နနာရီရှိပြီလဲ"
၂ နာရီခွဲ... ဘာဖြစ်လို့လဲ
"ဟိုလေ.. ဒို့ ချွေးနဲနဲထုတ်စို့"
ဘာလဲ ယောကျာ် ဘာပြောလဲ
"ဘာလဲ ယောကျာ်ထင်တာ မိန်းမဟာ ပါရာစီတမောလားတဲ့ "
ဖြစ်ရလေ ဦးဦ အဲခရော့ရေ ဟားးဟားးဟားးး
အားလုံးကို လွမ်းဆွတ်သတိရလို့ ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စာစုတစ်ချို့ကို အမှတ်တရအနေနဲ့ ပြန်တင်လိုက်တာပါ.. ကျွန်တော် ပြန်တော့မှာဖြင့်လို့ အားလုံးကို ဒီကနေပဲ နှုတ်ဆက်ပါတယ်.. မမျှော်လင့်ပဲ ဆုံတွေ့ခဲ့ကြရသလို မမျှော်လင့်ပဲ ပြန်လည်ခွဲခွါကြရတာ သဘာဝပဲလေ.. သဘာဝကို မလွန်ဆန်နိုင်တော့လည်း သဘာဝအတိုင်း နေတာက ပိုသဘာဝကျတာပေါ့ဗျာ.. (ကျွန်တော့်အတွက်ပါ)
ကျွန်တော့်ကို အမှတ်တရဖြစ်စေခဲ့တဲ့ စာစုများနဲ့ အစဉ်အားပေးခဲ့တဲ့ စာဖတ်သူ ညီကိုမောင်နှမများရဲ့ မေ့မရတဲ့ အမှတ်တရ အားပေးမှုတွေကို ပြန်လည်စုစည် ထားတာပါ..။
အဖေကိုသတ်တဲ့သား (သို့မဟုတ်) အမေကိုချစ်တဲ့သား
သတိရလိုက်ပါ “ငါ့” ကို
ရား.. ရား.. ရား..
ဒုက္ခပေးတဲ့အပူ (သို့မဟုတ်) ပရတ်တတ်တတ်
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း အားလုံးသော မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကို သတိရလွမ်းဆွတ်ခြင်း များစွာဖြင့်...
ဒုက္ခပေးတဲ့အပူ ဇာတ်သိမ်းပိုင်း (သို့မဟုတ်) ပရတ်တတ်တတ်
အနှိပ်သည်အဖိုးကြီး လက်စွမ်းပြလိုက်လို့ ငါးမိနစ်လောက် ပျော့ခွေသွားပြီနောက် ရေတွေငတ်လာတယ်ဗျာ.. ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း “ဦးလေး ဦးလေး.. ရေနဲနဲလောက် သောက်ချင်တယ်ဗျာ.. ဦးလေးတစ်ချက်ပဲ ကိုင်လိုက်တာ ရေတွေတောင် ငတ်သွားတယ် ဦးလေးရေ..း)”..
“ဟား..ဟား..ဟား.. ဒါတောင် အကင်းပဲ ရှိသေးတယ်နော် ကောင်လေး.. လာမယ် လာမယ်.. မင်း ဦးလေးအိမ်က မပြန်မချင်း နောက်ထပ် ရေငတ်ရမယ့် ပုံစံတွေ ရှိသေးတယ်..းP”..
အဖိုးကြီးက အဲလိုလည်း ပြောလိုက်ရော.. ကျွန်တော့်မှာ ပြုံးနေရင်းမှ ရီရမလိုလို.. ငိုရမလိုလို.. ဖြစ်သွားတာပေါ့.. စိတ်ထဲကတော့ ရေသောက်ရင်း တွေနေမိတယ်.. “အင်း.. နောက်ထပ် ရေငတ်မဲ့ ပုံစံတွေက ဘာများပါလိမ့်..”..
“ဦးလေးရေ.. နောက်ထပ် ရေငတ်မယ့်ပုံစံတွေ ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ ခုကတည်းကလေ ရေကြိုသောက်ထားရင် ပိုမကောင်းဘူးလား” လို့ ပြောလိုက်ရင် ကောင်းမလားဆိုပြီး အတွေးတွေဝင်လာလို့ တွေးနေတုန်းမှာပဲ..
“ကဲ.. ကောင်လေး.. ဘယ်လိုလည်း သက်သာလား”..
“သသသသက် သက်သာပါတယ်ဦးလေး”..းP
“ဟုတ်ပြီး.. အဲဒါဆို ဒီတစ်ခါ မှောက်အိပ်ကွာ.. ” ..
“ဟင်.. ဦး. ဦးလေး.. မှောက်အိပ်ရမယ်.. ဟုတ်.. ဟုတ်လား..”..
“ဟုတ်တယ်လေကွာ.. ကောင်လေးကလည်း.. မင်းတို့လို နိုင်ငံခြားသွားပြီး အညောင်းထိုင်တဲ့သူတွေ ခါးကိုပါ ထိခိုက်တယ်ကွ.. အဲဒါကြောင့် ဦးလေးက ခါးကို သေချာပြင်ပေးမယ်.. အကျောတွေဘာတွေ ပြန်ပြင်ပေးမယ်ကွ.. ဦးလေးက မင်းတို့အရွယ်လောက်ကဆို သန်သလားမမေးနဲ့ ကောင်လေးရာ.. ဆန်နှစ်တင်းအိပ်ကို “ဆွပ်” ကနဲ့ ဆို ဆွဲမပြီး ကိုယ့်ပုခုံးပေါ် ကိုယ်ပစ်တယ်တာ.. အဲလိုမျိုး “ဆွပ်” ကနဲ့ အလုပ်ကောင်းလို့လေ.. “ခွပ်” ကနဲ့ဆိုပြီး ခါးမျတ်သွားတာ ကောင်လေးရာ.. တစ်ဆယ့်ငါးရက်လောက်ကို လမ်း ကောင်းကောင်း လျှောက်လို့ မရဘူး ဖြစ်သွားတာကွ..းP
“ခိခိခိ.. ဖြစ်ရလေ ဦးလေးရာ..”..
“အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဆရာတစ်ယောက်ကနေပြီး ဦးလေးခါးကို လာနှိပ်ပေး.. လာပြင်ပေးသွားတာ.. အဲဒီပညာကို ဦးလေး ကောင်းကောင်း ရလိုက်တယ်ကွ.. အဲဒါကြောင့် မင်းခါးကို သေချာကိုင်ပေးမယ်.. ဘာမှ မပူနဲ့” ဆိုပြီး ပြောလည်း ပြောပြီးရော အဖိုးကြီးက နှိပ်တာပေါ့ဗျာ.. လက်နဲ့ ခါးကို တစ်ချက်ပဲ ထိရသေးတယ်.. ကျွန်တော့်မှာ
“အု..”.. နောက်တစ်ချက် ထပ်ထိတော့ “အိ”.. နောက်တစ်ချက် ထပ်ထိတော့လည်း “အွတ်”.. ကြာတော့ ကျွန်တော် မအောင့်နိုင်တော့ပဲ.. ဟားဟားဟား.. ဟားဟားဟား.. ဆိုပြီး ရယ်တော့တာပေါ့ဗျာ.. အဲလိုလည်း ရယ်ရော.. အဖိုးကြီးက..
“ဟ.. ကောင်လေး.. ဘာဖြစ်တာလဲ.. ဘာလို့ ရယ်တာလဲကွ..”..
“ယား.. ယား.. ယားလို့ပါ ဦးလေးရ.. ဦး.. ဦး.. ဦးလေးရာ.. ခါးကို မနှိပ်လို့ မရဘူးလားဗျ.. ဟိုလေ.. ကျွန်တော် မခံစားနိုင်လို့ပါ.. ဦးလေးနှိပ်တာ.. ကလိထိုးနေသလိုပဲ..း)”..
“ဩော်.. အဲလိုလား.. မင်းက အနှိပ်မခံဖူးလို့ပါကွာ.. လာပါ.. မှောက်စမ်းပါ.. ဒီတစ်ခါတော့ မယားစေရဘူး.. မယားတဲ့နည်း ဦးလေးသိတယ်.. မင်းက ယားတတ်တယ်ဆိုတာ အစောကမှ မပြောပဲကွာ.. အစောကတည်းက ပြောထားရင် ခုလိုဘယ်ဖြစ်မလဲ ကောင်လေးရ.. မှောက်နေ.. မှောက်နေ.. ဦးလေး ဆေးလိပ် သွားယူလိုက်မယ်” ဆိုပြီး ထသွားရောဗျာ..
“ဟိုက်.. ဒွတ်ခပဲ.. ဆေးလိပ်သွားယူမယ်တဲ့.. တေဘီချရာ.. ဒီတစ်ခါတော့ တစ်ကယ်ကို ရေမငတ် ငတ်အောင် ဆေးလိပ်မီးနဲ့ ထိုးတော့မှာလားမသိဘူး..းP”
ပြန်ရောက်လာတော့ ဆေးလိပ်ကို ဘေးမှချပြီး ကျွန်တော့်ကို စနှိပ်တော့တာပေါ့.. ခါးမှ.. ကျောပြင်.. ကျောပြင်မှ လက်ဖျံရိုး.. အဲဒီကမှတစ်ဆင့် ပုခုံး.. ဇက်.. အဲလိုတွေ နေရာလပ်မကျန် နှိပ်ပေးတာပေါ့ဗျာ.. အဲလိုနှိပ်လိုက်တော့ ယားတဲ့စိတ်က ပျောက်ပြီး အိပ်ငိုက်သလိုလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ..
အဲလိုငိုက်နေတုန်းမှာပဲ.. “ချပ်.. ချပ်.. ချပ်” ဆိုပြီး မီးခြစ် ခြစ်သံကိုကြားလိုက်တယ်.. ဒါပေမယ့် လူက မှိန်းချင်ချင် ဖြစ်နေတော့ လှည့်မကြည့်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတာပေါ့..
အဲလိုနဲ့ ကျွန်တော်ကလည်း မှိန်းနေခိုက် အဖိုးကြီးကလည်း နှိပ်တာပေါ့ဗျာ.. အဖိုးကြီးက နှိပ်ရင်း ဆေးလိပ်ဖွာရင်း ဆေးလိပ်ဖွာရင်း နှိပ်ရင်းပေါ့ဗျာ.. တစ်လှည့်မှာတော့ အဖိုးကြီး ဆေးလိပ်ကို ဖွာလိုက်တာ.. “ပရတ်တတ်တတ်” ဆိုပြီး မီးဖွားလေးတွေ စင်ထွက်တာ ကျွန်တော့်ကျောပေါ် ကျလေရောဗျာ..
အဲလိုကျတော့ ကျွန်တော်လည်း ပူတာပေါ့.. ပူတော့ “အင့်” ဆိုပြီး တစ်ချက် လှုပ်လိုက်တာ.. အဖိုးကြီးက
“အေး.. အဲဒီအပူတွေပဲ လူကိုဒုက္ခပေးတာ..းP အောင့်ထား.. အောင့်ထား..”..
နှိပ်ရင်းနှိပ်ရင်း နောက်တစ်ခါ “ပရတ်တတ်တ်” လည်းဆိုရော.. ကျွန်တော်လည်း “အား” ဆိုပြီး ဖြစ်ပြန်တော့ အဖိုးကြီးက..
“ဘာဖြစ်လဲ ကောင်လေး.. ပူပြန်ပြီးလား..”..
“အေး.. အေး.. အဲဒီအပူတွေပဲ လူတွေကို ဒုက္ခပေးတာ.. ဒီအပူတွေ ကုန်သွားမှ မင်းသက်သာမှာ.. အောင့်ထား.. အောင့်ထား ကောင်လေး..”.. လို့ ပြောပြီး ဆက်နှိပ်ပြန်ရောဗျာ..
ဒီတစ်ခါကျတော့ အဖိုးကြီးက နှိပ်ရင်းနဲ့ နှာခေါင်းယားလာတယ်ထင်တယ်ဗျာ.. ပါစပ်က ဆေးလိပ်ကို ကိုက်ရင်း တန်းလန်းနဲ့မှ လက်နဲ့ နှာခေါင်းကို ပွတ်လိုက်တာ.. လက်က နှာခေါင်းဆီကို မရောက်ခင် လမ်းခုလတ်မှာတင်.. ဆေးလိပ်ကို တိုက်မိပြီး မီးရဲနေတဲ့ ဆေးလိပ်ထိပ်ပိုင်းက ကျွန်တော့်ကျောပြင်ပေါ်ကို ကျလေရောဗျာ.. အဲလိုမျိုး မီးခဲကျတော့ ကျွန်တော် မအောင့်နိုင်တော့ပဲ.. “ဟိုက်.. အား.. ဟိုက်” ဆိုပြီး “ငါးပြင်မ ဆားထိသလို” ဖြစ်တော့ အဖိုးကြီးက..
“ဟ.. ဟ.. ဟ.. ကောင်လေး.. ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ..”..
“ဘယ်လိုမှ မဖြစ်ဘူး ဦးလေးရေ.. ပူလို့.. ပူလို့.. မအောင့်နိုင်လို့.. ထခုန်တာ..”..
“အောင့်ထားစမ်းပါ.. အဲဒီအပူတွေက လူကိုဒုက္ခပေးနေတာ..”..
“မဟုတ်ဘူးဦးလေးရ.. အခုဟာက ခန္ဒာကိုယ်ထဲက အပူမဟုတ်ဘူး ဦးလေးရ.. ဦးလေးဆေးလိပ်မီးက ကျတဲ့ မီးပွားအပူကို ပြောတာ.. ဒီထက်အောင့်ထားရင်လည်း.. ကျွန်တော် အသားကင် ဖြစ်တော့မယ် ဦးလေးရ.. အဲတော့မှ.. “အဲဒီအပူပဲ ကျွန်တော့်ကို အသားကင် ဖြစ်သွားစေတာ” ဆိုပြီး လမ်းဘေးဆိုင် ရောက်နေအုံးမယ်ဗျာ “အား”.. “ကျွတ်” “ကျွတ်” “ကျွတ်” ပူထှာ..းP တော်တော်ဆိုးတဲ့.. ဦးလေး.. နေမကောင်းပါဘူးဆိုမှ.. ဇွတ်.. အဟွတ်.. အဟွတ်..း-)
ဩော်.. မေ့လို့.. “ပရတ်တတ်တတ်” “ပရတ်တတ်တတ်” ဆိုတာက ဆေးလိပ်ကို အားရပါးရ ရှိုက်ဖွာလိုက်ရင် မီးပွားစင်တဲ့အသံနော်.. ပရတ်တတ်တတ်.. ပရတ်တတ်တတ်..းP
အားလုံပဲ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း
ဩော်.. အပူ အပူ.. တယ်လေး ဒုက္ခပေးပါလားနော်..
ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေက အပူငြိမ်းအောင် လုပ်နေတာလား.. အပူပေါ် အပူဆင့်အောင် အပူထပ်ရှာနေတာ များလားမသိ.. တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း တွေးရခက်လွန်းတယ်.. ပြင်ပအပူကို များသေားအားဖြင့် ခံနိုင်ရည်ရှိတာ များပါတယ်.. အတွင်းအပူဖြစ်တဲ့ (ရင်တွင်းအပူ) ကိုတော့ မခံစားနိုင်ကြဘူးလေ..
တော်ပါပြီ အပူတွေ မလိုချင်ပါဘိ
တစ်နေ့မှာ ဒီအပုတွေ ငြှိမ်းမယ်ပါ့
ဒီလိုဆိုပြန်တော့လည်း တစ်မျိုးလေး ဖြစ်ပြန်ရော..။
သမီးရည်းစားဘဝ ရောက်တော့လည်း သမီးရည်းစားအပူ၊ အဲဒီအဆင့်ကို ကျော်လွန်သွားပြန်တော့ မိန်းမအပူ၊ လင်ယောင်္ကျားအပူ၊ အဲကနေတစ်ဆင့် နောက်ထပ် သားသမီးအပူ၊ ခုခေတ်မှာတော့ နောက်ထပ် မြေးအပူပြီးရင် ပူစရာ မရှိတော့ဘူးလို့ ထင်တာပဲ.. ခေတ်က ဆုတ်ခေတ်ကို ရောက်နေပြီးလေ.. လူတွေကလည်း အသက်တိုပြီး ကမ္ဘာကြီးကလည်း ငိုနေပြီ.. ကိုယ်ငိုနေတာကိုတော့ ကိုယ်မသိ.. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ်မပူပဲ သူများအတွက်သာ လိုက်ပူနေတာကလည်း ခက်တော့ ခက်သားဗျ.. အဲဒါတွေက တချို့သော ရင်တွင်းအပူတွေပေါ့ဗျာ..
ခွင့်ပြန်သွားတော့ လောလောလတ်လတ် ကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရတာက ရင်တွင်းအပူ မဟုတ်ဘူးဗျာ ပြင်ပအပူပါ ပြင်ပအပူဆိုတော့ နဲနဲတော့ သက်သာတာပေါ့ဗျာ.. ဖြစ်ပုံက ဒီလိုဗျ..
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အလုပ်လာလုပ်တဲ့သူတွေမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူကြဘူးလေ.. တစ်ချို့က ဆိုဒ်ထဲ အလုပ်လုပ်ရတယ်.. တစ်ချို့က ရုံးတွေမှာ လုပ်တယ်.. တစ်ချို့ကြတော့လည်း ဟိုသွားဒီသွား အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာ.. မျးသောအားဖြင့်တော့ ကျွန်တော်တို့လို ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရတဲ့သူတွေအတွက် ညောင်းချိပြီး အပူငုတ်တယ်.. အပူအောင်းတယ်လို့ လူတွေပြောတာ များတယ်.. အပူငုတ်တဲ့နေရာ.. အပူအောင်းတဲ့နေရာကို လျှောက်မတွေး နဲ့နော်..းP သူ့ဟာသူ ဘယ်နားငုတ်ငုတ် ဘယ်နားအောင်းအောင်း.. ငြှိမ်းရမှာက ကိုယ့်တာဝန်ပဲ..း)
အဲလိုညောင်းချိပြီး ကွတကွတနဲ့ ပြန်သွားတဲ့ကျွန်တော်.. ဟိုလည်းရောက်ရော.. အရင်ဆုံး ဘယ်ကိုသွားမယ်လို့ ထင်သလဲ..းP သိတယ်.. လူကြီးမင်းထင်တဲ့ နေရာပဲ.. မှန်တယ်.. သွားမယ်ဆိုပြောနော်.. လိုက်ပို့မယ်..း)
အဲကိုလည်းရောက်ရောဗျာ.. လူကြီးမင်းတို့ထင်တာ မှန်တယ်.. ဒါပေမယ့် မှားတယ်.. မှန်တယ်ဆိုတာက ဒီလိုလေ လူကြီးမင်းတို့က “မာဆတ်” သွားတယ်လို့ ထင်မှာကိုး.. အဲဒါကြောင့် မှန်တယ်လို့ ပြောတာ..
မှားတယ်ဆိုတာက “မာဆတ်” တော့ “မာဆတ်” ပဲ.. ဒါပေမယ့် ဟို “မာဆတ်” မဟုတ်ဘူး.. ဝမ်းဘိုင်ဝမ်း နှိပ်တဲ့ အဖိုးကြီး “မာဆတ်” ဗျ..းP တစ်ယောက်ကို နေ့တစ်ဝက်လောက် နှိပ်တာ.. အသက်လည်း အတော်ကြီးတယ်ဗျ.. စိတ်ရင်းကလည်း တကယ်ကောင်းဗျာ.. အသက်သာကြီးတာဗျာ.. ဗလတောင့်ချက်က ကမ်းကုန်ပဲဗျ.. ခပ်ပိန်ပိန် ကနွဲ့ကလျ လိန်တိန် လိန်တိန်နဲ့ လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့ ခပ်နွဲ့နွဲ့ ယောင်္ကျားလိုမျိုးကို ခြေထောက်ကနေကိုင်ပြီး အဝတ်ဖွတ်သလိုမျိုး ဖြောင်းဒိုင်း.. ဖြောင်းဒိုင်းနဲ့ ကိုင်ဖွတ်ပလိုက်မယ့်ပုံစံမျိုး.. အနှိပ်သာခံရတာ.. နောက်ကြောင်း မအေးသလိုတော့ ခံစားရသားဗျ..းP
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အနှိပ်ခံတာပေါ့ဗျာ.. အဖိုးကြီကလည်း နှိပ်ရင်း စကားပြောရင်း.. စကားပြောရင်း နှိပ်ရင်နဲ့ ခြေထောက်ကနေမှတဆင့် အပေါ်ဘက်ကို တဖြည်းဖြည်း တက်လာတာ.. နေရာတစ်ခုရာက်တဲ့ အခိုက်တန့်မှာ.. အဖိုးကြီးက တစ်စုံတစ်ခုကိုစမ်းပြီး အံဩသွားတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့
“ “ဟိုက်”.. ကောင်းလေး.. မင်းဟာက ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ.. တစ်လုံးကကြီးပြီး တစ်လုံးက သေးနေတယ်..းP”.. ပြောပြောဆိုဆိုမှာပဲ အဖိုးကြီးက စမ်းမိထားတဲ့ဟာကို..
“ဂွပ်” ကနဲ့ ညှစ်ချလိုက်တာ..
(((((((“ဘုရား”))))))) ဆိုပြီး တစ်ချက်လေးပဲ ငယ်သံပါအောင် အော်လိုက်ရတယ်.. ပျော့ခွေသွားပြီး ငါးမိနစ်လောက်ကို စကားမပြောနိုင် ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ.. တော်တော်ဆိုးတဲ့ အဖိုးကြီး.. လူဆိုး..းP
အရမ်းမတွေးနဲ့နော်.. ဟိုထင် သည်ထင်လည်း လျှောက်မထင်နဲ့နော်.. ဒါပေမယ့် တစ်ခုပြောခဲ့မယ် လူကြီးမင်းတို့ တွေးတာ.. ထင်တာတွေ အားလုံးမှားတယ်..းP
အဖိုးကြီး စမ်းမိတာက ဒူးနှစ်ဖက်က ဂုံညှင်းကိုပါ.. ကျောင်းသားဘဝက စက်ဘီးမှောက်လို့ အဲဒီဂုံညှင်းက ဒဏ်ရာရ ထားတာ.. ဒဏ်ရာရထားတဲ့ဖက်က နဲနဲသေးပြီ ကျန်တစ်ဖက်က ကြီးနေတာလေ.. ပြီးတော့ တစ်ခါတစ်လေ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား လုပ်ပါများရင် ဒူးက ပြန်ပြန်နာတယ်.. အန်မကျသလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ.. အဲဒါကို အဖိုးကြီးက သိဟန်တူပါတယ်ဗျာ.. အဲဒါကြောင့် “ဂွပ်” ကနဲ့ ချထည့်လိုက်တာ တစ်ချက်လေးပဲ အော်လိုက်နိုင်တယ်.. တစ်ခါတည်းကို ပျော့ခွေကျသွားတာ..
((((ဟူးး)))).. ရှင်းပြလိုက်ရတာ မနည်းပါလားနော်.. လူကြီးမင်းတို့ ထင်တာတွေ မှားတယ်ဟုတ်..းP
MC ယူမယ်ဆို သတိထား
“အား.. အား.. ကျွတ်.. ကျွတ်.. ကျွတ်.. အင်း.. ပါးပါးပါးပါးရေး.. မလွယ်ဘူးကောင်ရေ.. တော်တော်ကို ရက်စက်တဲ့ ဆရာဝန်ပဲ.. ”..
“ဘာဖြစ်ရမှာလဲကွ.. ငါအလုပ်မဆင်းချင်လို့ MC သွားယူတာလေ.. ဒေါက်တာက ငါ့ကို ပညာပေးလိုက်တယ်ကွာ တော်တော်လေးကို အီသွားတယ်..”..
“ဟေ.. ဟုတ်လား.. မင်းက ဘာလို့ အလုပ်မဆင်းချင်ပဲ MC သွားယူတာလဲကွ.. ”..
“ဟုတ်တယ်ကွာ.. ငါမနေ့ညက နဲနဲလေးများသွားလို့လေ.. မနက်ကျတော့ မောသလိုလို ဘာလိုလို ဖြစ်နေတော့ အလုပ်မဆင်းရင် ကောင်းမယ်ဆိုပြီး အတွေးရတာနဲ့ ကမန်းကတန်း ဆေးခန်းပြေးပြီး MC ယူဖို့လုပ်တာပေါ့ကွာ.. တော်တော်လေးကိုဆိုးတဲ့ ဒေါက်တာကွာ.. ”..
“မင်းကလည်း.. ပြောစမ်းပါကွာ.. ဒေါက်တာဆိုးတာကိုပဲ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောနေတော့တာပဲ.. ပြောမှဖြင့် ပြောပါ သူငယ်ချင်းရာ.. မရှက်ပါနဲ့.. ငါဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်မပြောပါဘူး.. လူစုံမှသာ ရှင်းပြမှာ စိတ်ချသူငယ်ချင်း..းP
“ဟေ့ကောင်.. ဟေ့ကောင်.. ငါစကားအကောင်းပြောနေတာနော်.. ဒါနောက်စရာမဟုတ်ဘူး..”..
“အေးပါကွ.. မနောက်ပါဘူး.. ဒေါက်တာက ဘာလုပ်လိုက်လို့လဲ.. ဆရာဝန်ဆိုတော့ မင်းကို ပိုးစိုးပက်စက်တော့ လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ငါထင်တယ်ကွ..”..
“ဟ... လုပ်တာမှ လွန်ရောကွာ.. ငါက တကယ်လည်း နဲနဲလေး မောသလိုလို ဘာလိုလို ဖြစ်နေလို့ ဒေါက်တာကို သွားပြောတာ..
Doctor,ialittle tired ပေါ့.. Can't breath very well ဆိုပြီး သွားပြောတာလေ.. အဲလိုလဲပြောလိုက်ရောကွာ ဒေါက်တာက ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ တောင်စမ်း မြောက်စမ်းနဲ့.. ပြီးတော့မှ Ok.. Ok..U come here and relax on this bed ဆိုပြီး ငါ့ကိုပြောတော့ ငါလည်း ခုတင်ပေါ်တက်ပြီး နှပ်နေတာပေါ့ကွာ.. ”..
“တစ်ခဏနေတော့ ဒေါက်တာက နားကျပ်ကြီးနဲ့ ငါ့ကို ဟိုနေရာစမ်း.. ဒီနေရာစမ်းတော့တာပေါ့ကွာ.. အဲလိုမျိုး စမ်းလည်း စမ်းပြီးရော.. ဒေါက်တာက.. Ok.. come on this machine ဆိုပြီး.. ဟို.. ပြေးတဲ့စက်လေကွာ.. အဲဒီ စက်ပေါ်ကို တက်ခိုင်းပြီး ငါ့ကိုပြေးခိုင်းတာ.. ငါ့ကိုယ်ပေါ်မှာလည်း ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်းပဲ.. ကြိုးနဲ့ ဂျွိုင်းထားတဲ့ စုပ်ခွက်တွေ တပ်ထားတာ.. အဲလိုတပ်ထားတော့ ပြေးနေတဲ့ အချိန်မှာလေ.. ဘေးမှာရှိတဲ့ တီဘီလိုလို ဘာလိုလို ဟာကိုကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီထဲမှာ လှိုင်းတွေ ထနေတာဟေ့ကောင်ရေ.. နှိမ့်လိုက် မြင့်လိုက်ပေါ့..
ပထမတော့ ဖြေးဖြေးပဲ ပြေးနေတာကွာ.. ပြေးရင်းပြေးရင်းနဲ့.. တဖြေးဖြေးနဲ့ မြန်လာတာကွာ.. ပြေးလေ မြန်လေ မြန်လေ ပြေးလေနဲ့ ပြေးလိုက်တာ နာရီဝက် ကျော်သွားတယ်ကွာ.. လူလည်း ဖတ်ဖတ်ကိုမောလို့.. ပြီးတော့မှ ဒေါက်တာက.. Ok.. Ok.. You are normal.. No problem.. Can carry on your job ဆိုပြီး ငါ့ကို ပြန်ပြောတာ ဟေ့ကောင်ရေ.. တော်တော်ဆိုးတဲ့ ဒေါက်တာကွာ.. MC မရတဲ့အပြင် အပြေးလေ့ကျင့်လိုက်ရသေးတယ်ကွာ.. ငါ တော်တော်လေးကို လေသွားတယ်...”..
“မင်းကတော့လေ.. ဖြစ်ရမယ်.. ဖြစ်ရမယ်.. လုပ်လိုက်ရင် တလွဲကြီးပဲ.. အဲဒါကြောင့်ပြောတာ မင်းက တလွဲဆံပင် ကောင်းတာလို့..းP..
ငါလည်း မင်းကိုပြောပြရအုံးမယ်.. ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ နယူးရီးယား တုန်းကလေ.. သူများတစ်တွေက အလုပ်ပိတ်လို့ ပျော်ပါးနေကြတာလေ.. ငါက အလုပ်ဆင်းရမယ်ဆိုတော့.. ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့ မင်းလိုပဲလေ MC ယူဖို့ လုပ်တာလေ.. မင်းပြောသလို ငါက ဒေါက်တာ “အထီး” နဲ့ မခံလိုက်ရဘူးကွ.. ဒေါက်တာ “အမ” နဲ့ ခံလိုက်ရတာ”
“ဟေ.. မှတ်ကရောကွာ.. ဒေါက်တာ “အမ” ဆိုတော့ မင်းကလည်း ငြိမ်နေတာပေါ့ ဟုတ်လားငါ့ကောင်ရ..းP”..
“ဟာ.. အရေးထဲ မင်းကလည်းကွာ.. ငါပြောပြမယ်.. မင်း.. ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်မပြောပြဘူးလို့ ငါ့ကို ကတိပေးရမယ် ဘယ်လိုလဲ..”..
“အေးပါကွ.. ငါမပြောပါဘူး.. ဒီလူနဲ့ဒီလူကွာ.. မယုံကြည်စရာ ဘာများရှိလို့လဲကွ.. ပြောမှာသာ ပြောစမ်းပါ..”..
“နယူးရီးယား မင်းတို့က အလုပ်ပိတ်တော့ ငါလည်း ဘယ်အလုပ်လုပ်ချင်ပါ့မလဲကွ.. အဲဒါနဲ့ ဆေးခန်းသွားပြီးတော့ MC ယူဖို့ လုပ်တာလေ.. ဆရာဝန်မက ဘာဖြစ်တာလဲလို့ မေးတော့.. ငါကလည်း ဝမ်းသွားတယ်ပေါ့.. ညက ခြောက်ခါရှိပြီး ဝမ်းသွားတာ.. ခုမနေနိုင်တော့လို့ ဆေးခန်းလာတာပါ ဒေါက်တာလို့ ပြောလိုက်တာကွာ..
အဲလိုလည်းပြောလိုက်ရော ဒေါက်တာ “အမ” က မင်းပြောသလိုပဲ တောင်စမ်း မြောက်စမ်းလုပ်ပြီး.. ဟိုးဘေးက ခုတင်ပေါ်မှာ လှဲနေပါဆိုလို့ ငါလည်း လှဲနေလိုက်တာ.. တခဏ အကြာမှာတော့ ဒေါက်တာ “အမ”.. ကကွာ လက်အိပ်နဲ့ ထွက်လာပြီး..
ခတ်ပြတ်ပြတ်ပဲ.. ပက်လက်လှန်နေရာက.. Turn to the other side.. Take Out Your Belt ဆိုပြီး ပြောပြီး.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... ... ... .. .. .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. .. ... ... .. ... .. .. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .... .. ... ... .. ... .. ... ... ... ... ... ... .. .. .. ... .. ... ... ... ... .. .. .. .. ..
ခုအဲဒီအကြောင်း တွေးမိလိုက်တိုင်း ငါ.. တော်တော်လေးကို ကြောက်သွားတယ်ဟေ့ကောင်ရေ.. အဲတုန်းကဆို နှစ်ရက်လောက် ကောင်းကောင်းထိုင်လို့မရ.. လမ်းလျှောက်လို့မရ ဖြစ်သွားတာကွာ.. နောက်ဆိုရင်တော့ကွာ ဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့တော့ MC သွားမယူရဲတော့ဘူးဟေ့ကောင်ရေ..းP
“အဟိး) အဟိး) အဟိး).. ပြောအုံးကွ ဝမ်းသွားတယ်လို့ မင်း.. မင်း.. ပြောတာနဲ့ ငါတောင် ကျက်သည်းထတယ် ဟေ့ကောင်ရေ.. ခိခိခိ..း)”..
မယုံမရှိနဲ့နော်.. ဖြစ်ရမ်မှန်တွေပါ.. စာရေးသူရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်တော့ ဟုတ် ဟုတ် ဘူး..း)
သူငယ်ချင်းရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ပါ.. ဘူလဲလို့ မေးနဲ့.. ပြောပြဘူး.. အတေတတ်.. အဟတ် အဟတ်..းP
တစ်ဆက်ထဲမှာပဲ ဒီပို့စ်လေးနဲ့ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်..
ကျွန်တော် “ကြက်မ” ဘဝ
ကျွန်တော် “ကြက်မ” ဘဝတုန်းကပေါ့.. ဥတွေ အများကြီး ဥရတယ်လေ.. ကျွန်တော်က ဥလိုက်.. လူတွေကလေ ဥကိုနှိုက်ပြီး ချက်စားလိုက်.. ပြန်ဥလိုက်.. ချက်စားလိုက်ပေါ့.. တစ်ခါတစ်လေ ဧည့်သည်လာရင်ကျွန်တော့်မှာလေ မျက်ခုံးလှုပ်ရတယ်.. ဥကိုနှိုက်စားရင်တော်သေးတယ်.. တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော့်ကိုပါ ဧည့်သည်အတွက်ပေါ့.. ချက်စားဖို့ဆိုပြီး လိုက်ဖမ်းတာ.. မနဲကို လွတ်အောင် ပြေးရတယ်..
တစ်နေ့မှာတော့ ကျွန်တော့်သခင်က ကျွန်တော့်ကို တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ဆီ ရောင်းလိုက်တယ်.. အဲဒီလူက မဆိုးပါဘူး.. ကျွန်တော့်ကို ချစ်လည်းချစ်တယ်.. ယုလည်းယုယတယ်.. အစာလည်း မှန်မှန်ကျွေးတယ်.. ပြီးတော့ ကျွန်တော့်အတွက် ကြင်ယာတော်ပါ ရှာပေးတယ်လေ.. ဒီလိုဆိုတော့ ကျွန်တော် အားရှိသွားတာပေါ့..
ကျွန်တော်က “ကတော်.. ကတော်” လို့ အော်လိုက်တာနဲ့ ချက်ခြင်းဆိုသလို ကျွန်တော့်အနားရောက်လာတာပဲ.. ကျွန်တော့်အတွက် အရမ်း ကို အားကိုရတယ်.. ကျွန်တော့်ကိုလည်း အရမ်းချစ်ရှာတယ်လေ.. ပြီးတော့ ကျွန်တော့် အတွက် အစာတွေလည်း ရှာပေးတယ်.. ကျွန်တော့်ချစ်သူနဲ့ကျွန်တော် အတူအစာရှာထွက်လို့ ရှိရင်လည်း ချစ်သူက ကျွန်တော်စားဖို့အတွက် အစာရှာပေးတယ်.. ကျွန်တော် ဘာမှ မပူရဘူးလေ.. တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး မေတ္တာသက်ဝင် ချစ်ကျွမ်းဝင်ရင်း ဘဝခရီးကို ပျော်ပျော်ပါးပါး လျှောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တာပေါ့..
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘဝရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ကျွန်တော် ဥဥရတာပေါ့.. ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော့်သခင်က ဥတွေကို မနှိုက်စားပါဘူး.. ကျွန်တော့်အိမ်ထဲမှာပဲ သေသေချာချာ စီပြီး ထားထားပေးတယ်.. အပြင်က အန္တရာယ်တွေ မကျရောက်နိုင်အောင်လည်း နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကာကွယ်ပေးတယ်.. ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ အိမ်ရဲ့ခြံဝင်းကိုလည်း ခွေးတွေ.. ကြောင်တွေ မဝင်နိုင်အောင် သေချာကာထားပေးတယ်လေ.. ကျွန်တော်လည်း သခင့်အတွက် ဥတွေ အများကြီးရအောင် ဥပေးတာပေါ့..
တစ်နေ့မှာတော့ သခင်က ကျွန်တော့်အိမ်ထဲဝင်ပြီး ဥတွေကို ယူသွားတာ ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်.. သခင်က ဘာလုပ်မယ်မှန်းမသိပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ “ကတော် ကတော်” လို့ အော်ရုံမှတစ်ပါး တစ်ခြား ဘာဆို.. ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူးလေ.. ကျွန်တော်က “ကတော် ကတော်” လို့ အော်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော့်ခင်ပွန်းသည်က ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာတာပဲ.. ခင်ပွန်းသည်ကလည်း သခင်က ဥတွေယူနေတာကို တွေ့သော်ငြားလည်းပဲ ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူးလေ..
ဒီလိုနဲ့ ညနေကျတော့ သခင်က ဥတွေပြန်ယူလာတာကို ကျွန်တော် တွေ့လိုက်တယ်.. ကျွန်တော်လည်း ဝမ်းသာ အားရဖြစ်ပြီး “ကတော် ကတော် ကတော်.. ((((((((ကတော်))))))))” ဆိုပြီး အသကုန် အော်လိုက်တာပေါ့လေ.. ကျွန်တော့်ခင်ပွန်းကလည်း ကျွန်တော့်နည်းတူ အရမ်းပျော်ရွှင်သွားပြီး ခုန်ပေါက်ရင်း တောင်ပံလေးများခတ်ကာ “အောင်အီးအီးအွတ်.. အောင်အီးအီးအွတ်” ဆိုပြီး တွန်ကြူးလိုက်တာပေါ့..
ခနနေတော့ သခင်က ကျွန်တော့်ကို လက်ဖြောက်တီးရင်း “တီး တီး တီး တီး” ဆိုပြီးခေါ်တော့ ကျွန်တော်လည်း သခင့်ဆီ အပြေးသွားတာပေါ့.. သခင်က ကျွန်တော့်ကို အသာလေး ပွေ့ချီပြီး ဥလေးတွေရှိရာ နေရာလေးဘေးမှာ ချပေးတယ်လေ.. ကျွန်တော်လည်း ဝမ်းသာအားနဲ့ ဥလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ပျော်မဆုံး ဖြစ်ရတာပေါ့..
ရက်သတ္တပတ် အတော်ကြာတော့ ကျွန်တော် ဥထားတဲ့ ဥကနေ ဘဲကလေးတွေ ပေါက်လာတာပေါ့.. ကျွန်တော့် သားသမီးတွေဆိုတော့ ကျွန်တော် အရမ်းချစ်တာပေါ့.. ဘဲကလေးတွေကလည်း ပုကွကွနဲ့လေ.. ကျွန်တော်လေ အရမ်းကို ချစ်တာ.. ကျွန်တော့်ခင်ပွန်းကလည်း ဘဲကလေးတွေကိုကြည့်ပြီး အရမ်းကို အားရကျေနပ်နေတဲ့ပုံပေါ့.. အရမ်းကို ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုကမ္ဘာကြီးကို ကျွန်တော် ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီလေ..
သခင်ကလည်း ကျွန်တော့် သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ ဘဲကလေးတွေကို ကြည့်ပြီး အရမ်းကို ပီတိဖြစ်နေတယ်လေ.. သခင်ကလည်း ဘဲကလေးတွေကို ပွေ့ချီပွတ်သတ်ပြီး အစာကျွေးတယ်.. ရေတိုက်တယ်.. ညစ်ပတ်ပေရေနေတဲ့ ဘဲကလေးတွေကို သခင်က သန့်ရှင်းရေးတွေ လုပ်ပေးတယ်.. သခင်ကလည်း အရမ်းဂရုစိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုကမ္ဘာလေးဟာ မပြောပြတတ်အောင်ကို ပြည့်စုံပြီး အေးချမ်းသာယာနေတာပေါ့..
ပြီးတော့ သခင်က ကျွန်တော့်သားသမီးတွေ ကစားဖို့အတွက် ရေကန်ငယ်ကလေးတစ်ကန် လုပ်ပေးတယ်လေ.. တစ်နေ့မှာတာ့ ဘဲကလေးတွေက သခင်လုပ်ပေးထားတဲ့ ရေကန်ထဲဆင်းပြီး ရေကူးရင်း ဆော့ကစားကြတာပေါ့.. အဲလို ရေကန်ထဲဆင်းပြီး ဆော့ကစားတာတွေ့တော့ “ကတော် ကတော် (((((ကတော်)))))” ဆိုပြီး ကျွန်တော် အော်တာပေါ့.. ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးကို ကျွန်တော့်သားသမီးတွေမှာ တွေ့လိုက်လို့ ကျွန်တော် အရမ်းကို တုန်လှုပ်သွားတယ်.. ဘဲကလေးတွေအပေါ်မှာလည်း အရမ်းကို စိုးရိမ်သွားတယ်လေ..
ကျွန်တော့်ခင်ပွန်းသည်ကလည်း ကျွန်တော့်အလားတူပါပဲ ရေကန်ပတ်လည်ရှောက်ရင်း အတောင်ပံတွေခတ်ပြီး ဂနာမငြိမ် ဖြစ်နေတာပေါ့.. ကျွန်တော့်သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ ဘဲကလေးတွေမှာတော့ အရမ်းကို ပျော်ပါးစွာ ဆော့ ကစားနေကြတယ်.. သခင်ကတော့ ဘဲကလေးတွေ ဆော့ကစားနေတာကို ကြည့်ပြီး သာလွန်းတဲ့ လဝန်းပမာပေါ့ သခင့်မျက်နှာက ကြည်နှုးမှုအပေါင်း သရဖူဆောင်လို့.. အဲဒီချိန်ဟာ ကျွန်တော်တို့ ဇနီးမောင်နှံနဲ့ သခင့်ကြားမှာ နားမလည်နိုင်တဲ့ ပဟေဠိလို ဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့..
ရေကစားပြီး အတော်တန်ကြာတော့ ဘဲကလေးတွေက ကုန်းပေါ်တက်ပြီး ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ တိုးဝှေ့လာတော့ စိုနေတဲ့ရေတွေ ခြောက်သွားအောင် ပွတ်သတ်ပေးရတာပေါ့.. ညညအိပ်ရင်လည်း ဘဲကလေးတွေမှာ အေးမှာစိုးလို့လေ.. ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအောက် ဝင်စေပြီး တောင်ပံများနဲ့အုပ်ကာ နွေးထွေးမှုတွေ ပေးရတယ်လေ..
တစ်နေ့မှာတော့ ဘာရယ်ကြောင့်မှန်းမသိ သခင်က ကျွန်တော့် ခင်ပွန်းသည်ကို ဖမ်းသွားတယ်.. ခင်ပွန်းသည်က ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ဘဲကလေးတွေကိုကြည့်ပြီး “ကတော် ကတော် ကတော်” နဲ့ အော်မြည်ရင်း အော်မြည်ရင်း အသံက ဝေးသည်ထက်ဝေးကာ တဖြည်းဖြည်း ဆိတ်ကွယ်သွားခဲ့တယ်.. ကျွန်တော့်သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ ဘဲကလေးတွေကလည်း “ပကျစ် ပကျစ်” နဲ့ အော်မြည်ရင်း ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ တိုးဝင်ကာ အကာကွယ် ယူကြရတယ်လေ.. မပြောပြတတ်အောင် ခံစားရပြီး ဘဲကလေးတွေအပေါ်လည်း ရင်ခွင်ထဲထည့်ကာ တောင်ပံဖြင့် ဖုံးအုပ်ပြီး ကာကွယ်ရုံမှတပါး ကျွန်တော် တတ်နိုင် လိမ့်မည်မထင်ဘူးလေ..
သခင်ကတော့ ကျွန်တော့်ကို အရင်တိုင်းပါပဲ.. စောင့်ရှောက်မြဲ.. ဘဲကလေးတွေအပေါ်လည်း ကြင်နာယုယမြဲ.. ဒါပေမယ့် ဘဲကလေးတွေက အရွယ် တဖြည်းဖြည်း ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှ ကျွန်တော့်အနား သိပ်မကပ်တော့ဘူး အရင်ကဆို “ကတော် ကတော်” နဲ့ အော်လိုက်တာနဲ့ “ပကျစ် ပကျစ် ပကျစ်” ဆိုပြီး ရင်ခွင်ထဲ တိုးဝှေ့လာတတ်တဲ့ ဘဲကလေးတွေက ခုဆို ပြောင်းလဲကုန်ပြီး.. ကျွန်တော့်အနား သိပ်မကပ်ကြတော့ဘူး.. ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော်နဲ့ ဘဲကလေးတွေကြား နားမလည်နိုင်နဲ့ ပဟေဠိတစ်ပုဒ်လို ထပ်ဖြစ်ပြန်တယ်လေ..
ခင်ပွန်းမရှိတော့လို့ အားကိုးမဲ့နေရာကနေ သားသမီးတွေကပါ ကျွန်တော့်ကို တဖြည်းဖြည်း ဥပက္ခာပြုလာတော့ ကျွန်တော့်မှာ မပြောပြတတ်အောင် ခံစားရတယ်.. သားသမီးတွေကို ရင်ခွင်ထဲထည့်ပြီး အတောင်ပံများနဲ့ ဖုံးအုပ်၊ နွေးထွေးမှုတွေ အပြန်အလှန်ရယူဖို့ ကျွန်တော် ကြိုးစားခဲ့တယ်..
နောက်ဆုံးမှာတော့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ ဘဲကလေးတွေက ကျွန်တော့်ကို မမှတ်မိတော့ပါဘူး.. ကျွန်တော်က “ကတော် ကတော် ကတော်” ဆိုပြီး ဘယ်လိုပဲ အော်အော် သူတို့ နားမလည်ကြတော့ဘူး.. ကျွန်တော့်အနား မကပ်ကြတော့ဘူး.. သူတို့လမ်း သူတို့သွားကြပြီလေ..
တစ်ချို့ တစ်ချို့သောသူများဟာ မိဘကို မိဘလို့ မသိတတ်တာ တွေ့နေရတယ်.. တစ်ခုခုဖြစ်လာရင် ငါ့မိဘ မကောင်းလို့ ခုလိုဖြစ်ရတာ ဆိုပြီး ပြောဆိုတာတွေ ကြားရတယ်.. သွေးမတော်သားမစပ်ပဲ မွေးစားထားရင်လည်း မိဘဟာ မိဘပါပဲ.. သားသမီးဟာ သားသမီးပါပဲ.. မိဘမေတ္တာကို နားလည်ပြီး ကျေးဇူးဆပ်နိုင်ကြပါစေဗျာ..
ဘဲကလေးတွေလိုတော့ ကျွန်တော့်ကို ပစ်မသွားကြပါနဲ့ဗျာ..း-)
မူကြိုကျောင်းသားဘဝ ကြက်မကြီး၏မေတ္တာကို အခြေခံထားပါတယ်။
့် စည်သူ(ပေါက်ကရ အတွေးအပိုင်းအစများ)
“ကျွန်တော်နှင့် အင်္ဂလိပ်စာ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို တွေ့လိုက်တာနဲ့ ဘာပေါက်ကရတွေ လုပ်အုံးမလဲမသိဘူး ဆိုပြီး မထင်နဲ့နော်.. တကယ့် အဖြစ်အပျက်ကို ရေးမှာပါ..းP
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်ကဆို အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာရတာကို အရမ်း ဝါသနာပါတာ.. ဝါသနာပါသလောက်ကိုလည်း လေ့လာဖြစ်ပါတယ်.. လေ့လာဖြစ်သလောက်ကိုလည်း တစ်ခုမှကို မမှတ်မိဘူး.. (ဂယ်ပါ)းP ကျောင်းမှာဆိုလည်း ဆရာမက နာမည်ခေါ်ပြီး အင်္ဂလိပ် Text Book ထဲက Paragraphs တွေ ဖတ်ခိုင်းရင်လည်း ကျွန်တော့်နာမည် ထိပ်ဆုံးက.. ကျွန်တော်က လေ့လာမှုအား ကောင်းသကိုးဗျ..းP ( English ကိုပြောတာနော်)
ခုနှစ်တန်း ကျောင်းသားဘဝ ရောက်တော့ အတန်းပိုင်ဆရာမက ကျွန်တော့်ကို အတန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရွေးလိုက်တာပေါ့ဗျာ.. အဲလို ရွေးလိုက်တော့ ခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ ညီအောင် ကျွန်တော်ကလည်း အခန်းသန့်ရှင်းရေး.. သောက်ရေအိုးရေဖြည့်.. ခုံတန်းစီ.. ဘုရားပန်းရေလဲ.. သင်ပုန်းကြီးကိုလည်း အတန်းပိုင် ဆရာမ မလာမှီ.. ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်း မထိုးမှီအချိန်အတွင်း ပြောင်နေအောင် သုတ်ထားပေးရတယ်.. အတန်းခေါင်းဆောင်က ကျွန်တော်ကိုးဗျ.. ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ အနစ်နာတော့ ခံရတယ်လေနော်..း)
အဲလိုနဲ့.. တစ်နေ့မှာတော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဗျာ.. ကျွန်တော့် ဆိုင်ကယ် တဝီဝီနဲ့ ကမြင်းကြောထနေရာကနေ ဆိုင်ကယ်မှောက်ရောဗျာ.. ဆိုင်ကယ်မှောက်တော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ.. အကျက ဘယ်လှမလဲဗျာ.. ဝုတ်ဝုတ်ကျ “ခွေးကျ” ကျတာပေါ့.. ဆိုင်ကယ်တစ်ခြား လူတစ်ခြားဖြစ်ပြီး ဆိုင်ကယ်လည်းကြေ.. လူတော့ မသေပါဘူး.. မသေရုံတမင်ပါပဲ.. ဒူးတစ်ဖက်ကလည်း ဂုံညင်းပါ ထွက်မတတ်ပါပဲ.. အဲဒီ ဂုံညင်းက ပယ်သွားတာဗျ.. အဲလိုမျိုးပယ်သွားတော့ ဒူးခေါင်းက ကွေးလို့ ဆန့်လို့ မရဘူးဖြစ်သွားတာ.. “ခွေးကျ” ကျတာဆိုတော့ လက်ဖဝါးတွေကလည်းကွဲ.. တံတောင် တွေလည်းပြဲပေါ့.. ကမြင်းတာလေ.. ကမြင်းတာ..းP
ဆေးရုံရောက်တော့လည်း ဆရာဝန်က ဘာမှကို မလုပ်ပေးရဲဘူးဗျ.. ထုံးစံအရပေါ့လေ.. ဆိုင်ကယ်မှောက်တာမှ ဟုတ်ရဲ့လား.. ရန်ဖြစ်ကြလို့ ဒဏ်ရာရလာတာလား.. ဆိုပြီး ရဲစခန်းကို ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားလိုက်ရောဗျာ.. အဲမှာမှ ဒုက္ခနဲ့ လှလှ စတွေ့တာ.. ဒဏ်ရာကနာ.. နပ်စ်မလေးက အရက်ပျံနဲ့တို့.. ရဲကစစ်နဲ့ အတော်လေးကို ခံစား လိုက်ရတယ်ဗျာ..
ဒဏ်ရာကို ဆေးရုံက ဆေးတွေဘာတွေလိမ်းပေးပြီး ပြန်လာတာပေါ့လေ.. အိမ်ရောက်တော့လည်း မလွယ်ပါဘူး အဖေနဲ့ အမေက တရားဟောတော့တာပဲ.. နားဒုက္ခလည်း အတော်လေးကို ခံလိုက်ရတယ်.. ဒါနဲ့ ခြေထောက်ကို ကွေးလိုက်ဆန့်လိုက် လုပ်ကြည့်တော့ မရဘူးဗျ.. အတော်လေးကို နာတာ.. နာမှာပေါ့ဗျာ ဒူးခေါင်းက ဂုံညင်းလေ ပုံမှန်နေရာမှာ မရှိပဲ ဘေးဘက်ကို မသိမသာလေး ပယ်ထွက်နေတာဗျာ.. အဲလိုနဲ့ မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီး အနှိပ်သည် အိမ်ကို ထပ်သွားတာပေါ့..
အဲကိုရောက်တော့လည်း အနှိပ်သည်က စကားတစ်ပြောပြောနဲ့ ဟိုကြည့်.. သည်ကြည့်.. ဟိုကိုင်.. သည်ကိုင်နဲ့.. ဘာမပြော ညာမပြော ဂလု ဂလု ဂလောက် ဆိုပြီး ပုစွန်ကွေး ကွေးနေတဲ့ ကျွန်တော့်ဒူးခေါင်းကို ဆွဲဆန့်လိုက်တာ “အောင်မယ်လေး သေပါပြီဟ” ဆိုပြီး အသကုန် ငယ်သံပါအေင် အားရပါးရ အော်ထုတ်လိုက်တာ.. ဘေးအိမ်က လူတွေတောင် ထွက်ကြည့်ကြတာဗျာ.. အဲလို လူတွေ ထွက်ကြည့်ကြတော့ ရှက်ကလည်းရှက်.. နာကလည်းနာ.. မျက်ရည်တွေကလည်းထွက်.. နှပ်တွေလည်းထွက်ကျ.. မလွယ်ပါဘူးဗျာ.. ဗျစ်စ်စ်..
အနှိပ်သည်က အဲလို လက်စွမ်းပြလိုက်တော့ ဂုံညင်းက ပြန်တည့်သွားတယ်.. ကွေးလို့ဆန့်လို့လည်း အိုကေတယ် မအိုကေတာက ခြေထောက်ကို ၁၈၀ံ ဆန့်လို့မရဘူးဗျ.. ခြေနှစ်ဖက်ကို စုံဆန့်လိုက်ရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ခါနီး ပဲထုတ် နေတဲ့ပုံစဲမျိုးလေ.. တစ်ဖက်က ဆန့်နေပြီး ကျန်တစ်ဖက်က ဒူးထောင်ထားသလို ဖြစ်နေတာ.. မေးတော့လည်း အနှိပ်သည်ကပြောတယ် တစ်ရက်နှစ်ရက်ဆို အိုကေသွားမယ်တဲ့.. ဘာမှ မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့မှ “ဟင်း” ဆိုပြီး သက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်.. မတ်တတ်ရပ်ကြည့်တော့လည်း ခြေတစ်ဖက်က မြေမကျဘူး.. မြင်ဖူးကြလားမသိဘူး “ကြက်” တွေများ တစ်ခါတစ်ခါ မတ်တတ်ရပ်နေရင် ခြေတစ်ချောင်းကို ကြွပြီး ရပ်နေတာလေ.. အဲလိုပုံစံမျိုး ဖြစ်နေတာ.. မမြင်ဖူးရင် ခု ကိုယ်တိုင် အဲလိုထရပ်ကြည့်..းP ကမြင်းကြောထတဲ့ အကျိုးလေ..းP
ဒဏ်ရာအရှိန်ကြောင့် ညညလည်း အိပ်မရဘူး “ကျိကျိ”“ကျိကျိ” နဲ့ကိုက်တာ.. နောက်နေ့ ကျောင်းပြန်တက်တော့ ခါတိုင်းလုပ်နေကြ အလုပ်တွေကို မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလေ.. လူက အတော်လေးကို အီသွားတာကိုးဗျ.. အခန်းဖော် သူငယ်ချင်းတွေကိုပဲ လုပ်ခိုင်းပြီး စာသင်ခန်းထဲမှာ ဆရာမ မသိအောင် မသိမသာ ထိုင်နေရင်း စာသင်နေတာ.. ထိုင်နေရင်း ငါးမျှားနေတာလေ (ငိုက်နေတာကို ပြောတာ).. တိုက်ဆိုင်ချင်တော့ အင်္ဂလိပ်အချိန်.. ဒါနဲ့ ဆရာမက
“Mg Si Thu, please stand up” ဆိုလည်းဆိုရော ဆင်မရင်သာ ပုံစံမျိုးနဲ့ အသာလေးထပြီး.. (အဲလိုမထလို့က မရဘူးလေ.. ဒူးက နာနေတာကိုးဗျ..းP)
“Yes teacher” ပေါ့.. အဲလိုလည်း ပြန်ထူးလိုက်ရော ဆရာမက ဆက်မေးတယ်လေ..
“What do u do Si Thu?” ဆိုပြီး မေးလည်းမေးလိုက်ရော..
“ကျွန်တော် မနေ့က ဆိုင်ကယ်မှောက်ထားလို့ပါ ချယ်” ဆိုပြီး ဖြေလိုက်တာ “ဟားဟားဟား” “ဟားဟားဟား” ဆိုပြီး တစ်ခန်းလုံးက ဝိုင်းရယ်လိုက်ကြတာ တစ်ခန်းလုံး အတော်လေးကို ဆူညံသွားတယ်..
ဟုတ်တယ်လေဗျာ.. ကျွန်တော်က ဆိုင်ကယ်မှောက်ထားတာ ဒူးကလည်းနာနေတာ.. ငိုက်ကလည်း ငိုက်နေတာ ဆရာမကသာ “What do u do Si Thu?” ဆိုပြီးမေးတာ.. ကျွန်တော်က “ဒူး ဘာဖြစ်နေလဲ စည်သူ” ဆိုပြီးတော့ ကြားတာ.. အဲလိုကြားလို့လည်း ခုလို ဖြေလိုက်တာပေါ့နော်.. အဲဒါ ကျွန်တေ့ာ် အမှားလား.. အဲဒါကို တစ်ခန်းလုံးက ဝိုင်းရယ်ကြတယ်ဗျာ.. တော်တော်ကိုဆိုးတယ်.. ခိခိခိ..
ကျောင်းဆင်းတော့လည်း ကျောင်းက ကောင်မလေးတွေလေ.. ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီး ငါးပုဏ္ဏား မြှုံးထိုသလိုမျိုးနဲ့ ပြုံးစိ ပြုံးစိ လုပ်နေကြတာ.. အဲဒီရက်ပိုင်းဆို အပြင်မှာ တွေ့ရင်လဲ အဲတိုင်းပဲ.. အရှိန်မကုန်နိုင်ကြသေးဘူး.. ပြုံးစိစိ လုပ်နေကြတုန်းပဲ.. သူတို့တစ်တွေရဲ့ အပြစ်တော့လည်း မဟုတ်ပါဘူးနော်.. ကျွန်တော်ကိုယ်၌က တစ်လွဲဆံပင် ကောင်းနေတာကိုး..းP
အဲလိုနဲ့ တစ်လလောက်ကြာတော့ ကျွန်တော့် ဦးလေးတစ်ယောက် ဆုံးသွားတယ်.. နာရေးဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း အလုပ်ရှုပ်နေတာပေါ့.. ဦးလေးဆုံးသွားတော့ မိသားစုတွေက ဝမ်းနည်းကြ.. ငိုယိုကြနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အတော် လေးကို သံဝေဂ ရမိတယ်.. ညကပဲ စကားပြောနေသေးတယ်.. ဟာ.. မနက် မရှိတော့ဘူး.. အလုပ်ပေါင်းများစွာ လုပ်လိုက်တာ.. လုပ်လိုက်တာ.. ရှာလိုက်ရတာ.. စုဆောင်းလိုက်ရတာ.. ဟော.. နောက်ဆုံး သူသိပ်ချစ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ သူ့ဇနီး.. သူ့သားသမီးတွေကို တစ်ချက်လေးတောင်မှ စောင်းငဲ့ကြည့်ဖို့ အချိန်မရလိုက်ဘူး..
အိုးးးးး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ.. ကိုယ်လည်း တစ်နေ့ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ကြုံရမှာပါလား ဆိုတဲ့ အသိတစ်ခုက ခုနှစ်တန်း ကျောင်းသားဘဝမှာ ရလိုက်တယ်.. တကယ်လည်း တန်ဘိုးရှိပါတယ်.. အဲဒါတွေသိလိုက်တော့ ဘာဖြစ်လာလဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးလိုက်မိတယ်.. ဒေါသတွေကို ထိန်းနိုင်လာမယ်.. လောဘတွေကို အနည်းနဲ့အများပေါ့လေ သတ်နိုင်လာမယ်.. သူတစ်ပါးနဲ့ စကားပြောရာမှာလည်း ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကို ပြောဆိုခြင်းတွေ.. ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အပြုအမူတွေ လျော့နည်းလာမယ်.. ကိုယ့်အတွက်လုပ်ရင်း တစ်ပါးသူအပေါ် မထိခိုက် မနစ်နာအောင် ဘယ်လိုပုံ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စဉ်းစားတတ်တဲ့ အကျင့်လည်းရလာမယ် ဆိုပြီး ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် မေးဖြေတွေ လုပ်နေရာကနေလိုက်တာ.. ပြီးမှ သတိဝင်လာပြီး..
“ဟိုက်”..“ငါ.. ကျောင်းသွားရမယ်ဟ” ဆိုပြီး သတိဝင်လာတော့မှ “ဆပ်ပြာသယ် လင်ပျောက်သလိုမျိုး” ဖြစ်ကာ ကဗျာကယာ ကတိုက်ကရိုက် အဝတ်စားလဲပြီး ကျောင်းကို ပြေးရတာပေါ့ဗျာ.. ကျောင်းရာက်တော့ ၉ နာရီကျော် ရှိနေပြီး.. ဆရာမက စာသင်နေပြီး.. ကျွန်တော်လည်း ဆရာမကို ခွင့်တောင်းပြီးတော့ အခန်းထဲကို ဝင်လိုက်တာ ကိုယ့်ပုဆိုးစ ကိုယ်နင်းမိပြီး “ဗိုင်း” ကနဲ့ဆို ဆရာမနဲ့ အရှေ့ဆုံးတန်းက မိန်းကလေး ခုံတန်းရှေ့မှာ မှောက်ယက် လဲကျသွားလေရောဗျာ.. နဂိုကတည်းက နောက်ကျလို့ လောနေတာကိုးဗျ.. နဲနဲတော့ အီသွားတယ်.. ဒါပေမယ့် မနာချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကိုယ့်နေရာကိုယ် အသာလေး ဝင်ထိုင်လိုက်တာပေါ့ဗျာ..းP
တိုက်ဆိုင်ချင်ပြန်တော့လည်း ပထမဆုံး စာသင်ချိန်က အင်္ဂလိပ် အချိန်ပဲဗျာ.. ဩော်.. ကျွန်တော်က နောက်ကျမှ ရောက်လာတာဆိုတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်ကို စာမမေးလောက်တော့ပါဘူးလေ ဆိုပြီး စဉ်းစားနေတုန်းမှာပဲ ဆရာမကနေပြီး..
“ကဲ.. “ချယ်” ပြောမယ်.. သေချာနားထောင်နော်.. ဒီစာသင်ချိန် တစ်ချိန်လုံးမှာ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောမယ်.. “ချယ်” မေးရင်လည်း အင်္ဂလိပ်လိုပဲမေးမယ်.. ဖြေတဲ့သူကလည်း အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ဖြေရမယ်.. ဟုတ်ပြီနော်.. ကဲ.. အဲဒါဆိုရင် “ချယ်” စမေးမယ်.. အင်း.. ဘယ်သူ့ကို အရင်မေးရင် ကောင်းမလဲ” ဆိုပြီး ပါစပ်ကပြောရင်း သင်ပုန်းကြီးပေါ်မှာ “ချယ်” က စာတွေရေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ တစ်ခန်းလုံးက တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေကြတယ်.. ကျွန်တော်လည်း ပါတာပေါ့ဗျာ.. ကိုယ့်ကိုမေးမှာ လူတိုင်းက ကြောက်နေကြတာလေ.. တစ်ခဏအကြာမှာတော့..
“Ok.. Mg Si Thu, please stand up” လို့ ပြောလိုက်မှ.. တစ်ခန်းလုံးက သူတစ်ပေါက် ငါတစ်ပေါက်နဲ့ အသံတွေ ထွက်လာကြတော့တာ.. ခုနကတော့ တိတ်လို့..းP “ချယ်” ရဲ့ ခေါ်သံကိုလည်းကြားရော ကျွန်တော့်ခေါင်းတွေဟာ “ဒဿဂီရိ” လို ခေါင်းဆယ်လုံးပိုင်ရှင် ဖြစ်သွားမတတ် ခေါင်းကြီးသွားတာပေါ့ဗျာ..
“well.. well.., all students, please stay silently .”
“I want to askaquestion to Mg Si Thu.” ဆိုပြီး “ချယ်” ပြောလိုက်တော့မှ တစ်ခန်းလုံးက တစ်ခါတည်းကို ငြိမ်ကျ သွားတာဗျာ.. ပြီးတော့ “ချယ်” က ကျွန်တော့ကို မေးတယ်..
“Why do u late this morning Mg Si Thu?” လို့ မေးလိုက်တော့ ကျွန်တော်လည်း ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဘူး မေးတာကိုတော့ သိပါတယ်.. ဘယ်လိုဖြေရမှာကို စဉ်းစားမရဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတော့..
“I late this morning because my Uncle Air Cross .” ဆိုပြီး ဖြေလိုက်ရော.. တစ်ခန်းလုံးက တိတ်ဆိတ် နေရာမှ.. ဟိုနားက ခိခိခိ.. ဒီနားက ခိခိခိနဲ့ နောက်ဆုံး ဆရာမပါ မနေနိုင်ပဲ “ဟားဟားဟား.. ဟားဟားဟား” နဲ့ ရယ်လိုက်တော့မှ တစ်ခန်းလုံးက တခိခိ တဟားဟားတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတော့တာဗျာ.. တွေးတွေးပြီး ရယ်နော်..းP
အဲဒီ.. စာသင်ချိန် တစ်ချိန်လုံးလည်း ကျွန်တော့် အမေး အဖြေနဲ့တင် အချိန်ကုန်သွားပြီး စာမသင်လိုက်ရဘူးလေ..
ကျွန်တော်လည်း အဲဒီနောက်ပိုင်း “စည်သူ” ကနေ “Air Cross Si Thu” ဆိုပြီး နာမည်တွင်သွား ပါလေရောဗျာ..
မသိဘူးထင်တယ်.. လေဖြတ်တာ ((((((((((((((((((ဟေးးး)))))))))))))))))))) လေဖြတ်တာ..းP ကျွန်တော့်ဦးလေး.. လေဖြတ်တာ (((((((((((((((((((ဟေးးး)))))))))))))))))))) Air Cross..းP
း)းP ပျော်ရွှင်ရယ်မော နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း
ဘာရယ်မဟုတ် ဝါသနာပါတော့ ပေါက်ကရလေးတွေ ရေးမယ်လေ.
မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်း